Emeril Lagasse Power AirFryer 360 Instruction Manual - Boky Torolàlana +
Boky torolàlana momba ny torolàlana Emeril Lagasse Power AirFryer 360
Febroary 9, 2021 Febroary 10, 2021
3 Comments ao amin'ny boky torolàlana momba ny torolàlana Emeril Lagasse Power AirFryer 360
Home » Emeril Lagasse » Boky torolàlana momba ny torolàlana Emeril Lagasse Power AirFryer 360
1 Emeril Lagasse Power AirFryer 360
2.1 FANOMPOANA AIR
2.3 Boky Torolàlana / Loharano mifandraika
Jereo ny boky torolalan'ny tompona raha mila torolalana feno sy fampahalalana manan-danja momba ny fiarovana alohan'ny hampiasana ity vokatra ity.
ZAVA-DEHIBE: Esory ny faritra rehetra ao anaty boaty ary esory ny sarimihetsika miaro mazava na manga amin'ireo singa. Sasao amin'ny rano misy savony mafana alohan'ny hampiasana azy voalohany (kojakoja voafantina ihany no azo antoka fa tsy afaka manasa lovia).
Atsofohy eo ambanin'ireo singa fanafanana ambany (eo amin'ny farany ambanin'ny Unit) ny Drip Tray.
Apetraho amin'ny lovia Crisper * ny sakafo ary ampidino ao anaty fitoeram-baravarana iray ao anaty ilay Tray. Ampiasao ireo marika eo am-baravaran'ny Unit raha hisafidy ny talantalana tsara ampiasaina
ny fomba fahandro anao. * Ny Pizza Rack dia mizotra mankany amin'ny talantalana ihany koa. Ny Baking Pan dia tokony hapetraka eo an-tampon'ny Pizza Rack rehefa ampiasaina ny Baking Pan.
Ampiasao ny Program Selection Knob hisafidianana ny preset fisakafoanana AirFry.
Tsindrio ny bokotra Start / Pause mba hanombohana ny fizotran'ny fandrahoana sakafo. Azonao atao ny manery ity bokotra ity hiato mandritra ny tsingerin'ny fandrahoana.
Rehefa vita ny tsingerin'ny fahandroana dia ampiasao mitt na potholder amin'ny lafaoro mba hanesorana ny Crisper Tray amin'ny alàlan'ny fametahana azy ivelan'ny Unit.
Tazomy ny Rotisserie Spit mivory amin'ny zoro kely miaraka amin'ny ilany ankavanana avo kokoa noho ny ilany havia ary ampidiro ny ilany havia amin'ny Spit ao anatin'ny fifandraisana Rotisserie ao anatin'ny Unit. Amin'ny sisiny havia dia milamina tsara, alatsaho ny ilany ankavanan'ny Mandrora mankany amin'ny fifandraisana Rotisserie eo amin'ny ilany ankavanan'ny Fitaovana.
Ampiasao ny Program Selection Knob hisafidianana ny preset de fandrahoana Rotisserie.
Rehefa tapitra ny tsingerin'ny fandrahoana dia ampiasao mitt na potholder (silikaly tena tsara) mba hanesorana ny Rotisserie Spit amin'ny Unit amin'ny fanondrotana ny ilany ankavanana ary avy eo ny ilany havia an'ny Spit mba hamotsorana ny Spit amin'ireo teboka fifandraisana.
Emeril Lagasse Power AirFryer 360 Instruction Manual - PDF voaatsara
Emeril Lagasse Power AirFryer 360 Instruction Manual - PDF original
Boky Torolàlana / Loharano mifandraika
EMERIL LAGASSE EMERIL360P Torolàlana ho an'ny mpampiasa AirFryer 360Plus
Torolalana fanombohana haingana ∙ FRY FRY Jereo ny boky torolalana ho an'ny tompony mba hahazoana torolalana feno sy fampahalalana manan-danja momba ny fiarovana alohan'ny…
EMERIL LAGASSE 4 Quart AirFryer Guide
Torolalana fanombohana haingana Jereo ny boky torolalana ho an'ny tompony mba hahazoana torolalana feno sy fampahalalana manan-danja momba ny fiarovana alohan'ny fampiasana ity vokatra ity.…
Boky manual mpampiasa Intertek Power AIrFryer XL
Intertek Power AIrFryer XL Torolàlana ho an'ny mpampiasa *Vakio ny toromarika rehetra ampiasaina alohan'ny handrahoana sakafo miaraka amin'ny Power AirFryer XL.…
Boky torolàlana an'ny tompon'ny ELITE Power AirFryer
ELITE Power AirFryer DINGANA 1 Esory ny harona ivelany. Sintonina avy hatrany ny tànana Easy-Grip. Aza manindry ny harona…
Febroary 9, 2021 Febroary 10, 2021 Posted inEmeril LagasseTags: Emeril Lagasse, Power AirFryer 360
EMERIL LAGASSE EL-PAF360XL-D Torolàlana ho an'ny mpampiasa Airfryer 360XL Deluxe
Mifandraisa amin'ny resadresaka
Kathy Somerfield hoy:
Septambra 3, 2021 amin'ny 8: 07 am
Niantso ny laharan'ny fanohanan'ny mpanjifanao aho ary nahazo lehilahy iray izay tokony ho tao anatin'ny lahasa asa hafa. Niantso aho satria ny Emeril 360 Convection Oven (izay novidiko 14 volana lasa izay) dia niova ny mari-pana. Ho an'ny example, afaka nametraka azy tamin'ny "Mofomamy" aho ary mamadika ny mari-pana hatramin'ny 425 degre. Noho ny antony sasany dia niova izany ary azoko atao ihany ny mametraka azy hatramin'ny 230. Nanontany ahy ilay tovolahy Mpanohana ny mpanjifa niresaka tamiko raha manana C na F (Celsius na Fahrenheit) izy. Tsy mbola nahatsikaritra an'io aho taloha. Araka ny hita dia izao milaza C na Celsius. Ahoana no niovan'ity toerana ity avy any Fahrenheit? Tsy tadidiko ny nametrahako zavatra hafa. Azonao atao ve ny manoro hevitra ahy ny fomba hamerenako ity avy any Celsius hiverina any Fahrenheit. Misaotra anao.
Linda Pankiewicz-Bohn hoy:
Septambra 8, 2021 amin'ny 3: 16 am
Azoko atao ve ny mahazo mpampiasa Manuel fa ilay 360 dia tsy tao anaty boaty rehefa voaraiko
Diane Weaver hoy:
Oktobra 12, 2021 amin'ny 3: 17 pm
Mila miova avy any Celsius mankany Fahrenheit? Ahoana no anaovako izany?
Tehirizo ny anarako, mailaka ary webtranokala ao amin'ity mpitety tranonkala ity raha ny fanamarihako manaraka.
CARSON 500907125 Rundumlicht Orange Mit Electronics Instruction manual
IKEA 504.720.40 MITTLED LED ktchn hazavan'ny vatasarihana miaraka amin'ny sensor, fotsy azo ahena17 ” Boky torolalana
Protege IW630 Ao amin'ny Rindrina LCR Speakers Boky Torolàlana ho an'ny tompony
IKEA 104.878.16 EKENABBEN Open Shelf Unit Torolàlana
Rod Greene on Torolalana ho an'ny mpampiasa ny Panel Control BALBOA
C j Whitley on Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa headphone Bluetooth
Phil Gerber on Boky Torolàlana momba ny Thermostat Honeywell Pro Series
Truemeds on Fudakang Talking Infrared Thermometer 481109 FT-F41 Torolàlana fampianarana